January 2017 - Ceelhuur Online
AKHRISO: Jadwalka Khudbad jeedinta Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha
January 31, 2017 Duceysane280
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saaray sida ay khudbadaha u kala jeedin doonaan Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxtinimada Soomaaliya. maalinta khamiista ah ayaa lagu wadaa in sitoosa ay ubilaabato wajiga koowaad ee khudbadaha musharixiintu ka horjeedinayaan xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare waxaana uu jadwalka hadal jeedinta musharixiinta madaxweynaha soomaaliya
Sawirro: Alshabaab oo soo bandhigay Muuqaalada dagaalkii kulbiyow
January 31, 2017 admin255
Al-Shabaab ayaa soo bandhigay Sawirada Weerarkii ay ku qaadeen Saldhiga ciidanka dowladda Kenya ay ku leeyihiin degaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ay sheegeen in ay dileen in ka badan 67 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda,Weerarkaan ayaa dhacay Jimicii lasoo dhaafay, Alshabaab ayaa sanadkii horey sidan oo kale u weeraray saldhigii ciidamada kenya […]
Akhriso: Magacyada iyo shaqada Guddiga ilaalinta Anshaxa doorashada Madaxweynaha
January 30, 2017 January 30, 2017 admin151
Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa magacaabay guddi ilaalinta anshaxa doorashada Madaxweynaha, gudigaas oo ka kooban 9 xubnood. xubnaha la magacaabay ayaa ah shakhsiyaad bulshada rayidka laga soo xulay, kama mid ahan xildhibaanada barlamaanka.
January 30, 2017 admin206
MAALMAHAYGII MUQDISHO Hordhac’ Dal burburray, qaran dumay, dawlad ay ka la daateen hay’adeheedii oo dhan, ee soo maray walina ku jira; dagaallo sokeeye, ee beelo, diin, dhaqaale iyo damac kursi isugu jira, muuqa, muunadda, maamuuska iyo misaalka uu noqon karo, laga qaadan karo, laguna qaadan karo kaliya, ayaan aragtideyda gaaban sida ay i la tahay, […]
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeybgalaya shirka Midowga Afrika
January 30, 2017 admin164
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay ka ambabaxay magaalada Muqdisho isaga oo ku sii jeeda Magaalada Adis-Ababa ee Dalka Ethiopia. Madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka qeyb-galaya shir Madaxeedka Midowga Africa oo maanta ka furmaya Magaalada Adis-Ababa. Shirka ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin, Hiigsiga horumarineed ee Qaarada […]
Shabaab oo 7 Ruux ku xiray Tuulo Barwaaqo gobolka Gedo
January 30, 2017 admin219
Al-Shabaab ayaa la sheegay in Tuulo Barwaaqo oo 18-KM u jirta Degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo ay ku xireen 7 Qof oo labo ka mid ah ay yihiin Haween, sid ay sheegeen Dadka Deegaanka. Shabaabka ayaa dadka ay xireen waxa ay ku eedeeyeen in ay wax ka maleegeen dilka Sarkaal Shabaab ka tirsanaa Shabaab, kaas […]
Maxaan ku soo arkay magaalada Hobyo Godan?
January 30, 2017 January 30, 2017 admin252
Muddo sanad iyo laba bilood kadib ayay ii suurtagashay inaan booqasho ku tago magaalada qadiimiga ah ee HOBYO GODAN ee koofurta gobolka Mudug, Waa magaalo xeebeed istaartiiji ah, dadka ku dhaqan ayaa ku tiirsan kaluumeysiga iyo xoolaha nool, iyo beerahana. Magaalada Hobyo ayaa ka soo kabanaysa daqaradii dagaalada sokeeye, waxaa bishii Feberaayo 2016 Hobyo yeelatay […]
Maxaa ka cusub Khilaafka Siyaasadeed Galmudug?
January 30, 2017 admin169
Waxaa maalmahaan dagan xaalada siyaadeed ee dowlad goboleedka Galmudug, Magaalada Cadaado oo ah xarunta kumeelgaarka ah Galmudug ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee maalmo dhaweyd ka jiray. Dadweynaha ayaa ku jahwareeray halka ay wax u socdaan, waxayna inta badan aaminsan yihiin C/kariin Guuleed uu la haray Galmudug, halka xildhibaanada badankood […]
Sawirro: 194 Xildhibaan oo taageeray Xasan Sh. Maxamuud
Kulan lagu taageerayey Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka dhacay Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, kulan ayaa waxaa kasoo qeybgalay 194 xildhibaan oo labada aqal ah, Madaxweyne Xasan Sheekh, C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Galmudug iyo Cali Guudlaawe Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Munaasabadan ayaa waxaa khudbado ka jeediyey dhowr xildhibaan iyagoo sheegay in taageerayaan in […]
January 29, 2017 admin181
Guddiga Qaban qaabada Doorashada ayaa ku dhawaaqay inay isdiiwaan galiyeen 24-Musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha, iyadoo la soo gaba gabeeyay diiwaan gelinta Musharaxiinta, Kuma jiraan wax dumar ah musharixiinta is diiwaangalisay. Halkaan ka Akhriso Magacyada Musharaxiinta Rasmiga ah. Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Cabdiqaadir Cosoble Cali. Maxamuud Maxamed Culusow. Maxamuud […]